IPlasma 5.23, ngoku iyafumaneka kushicilelo lwesikhumbuzo sama-25 kunye nomxholo omtsha | Ubunlog
IPablinux | 14/10/2021 12:08 | Ukuhlaziywa ukuba 14/10/2021 12:10 | KDE, Ubuntu
Ngokucacileyo, namhlanje ibiyimini ebesiyiphawule kwikhalenda kuba iCanonical kuye kwafuneka iphumeze usapho lwe-Impish Indri, kodwa ndicinga ukuba kukho into ebaluleke ngakumbi ukubhiyozela. Kwaye, anditsho ukuba a Uhlobo olutsha Ubuntu Ezi ayizondaba zinkulu, kodwa kwiminyaka nje eyi-25 eyadlulayo ukuba i-KDE iqale ukuthatha amanyathelo ayo okuqala. Mhlawumbi wayenobuntwana obunokuthula, kodwa ayisiyiyo yonke into eyayilibhedi yeerosisi kude kube kutshanje, kwaye ngoku IPlasma 5.23, izinto ziya ziba ngcono.
I-KDE ihlala ikhupha iinguqulelo ezintsha zobume bayo bemizobo ngoLwesibini, kodwa iPlasma 5.23 ifikile namhlanje ngoLwesine ukuze umhla ungqamane ne-14 ka-Okthobha, i kde umhla wokuzalwa. Bebebhiyozela umsitho ngaphezulu kweeyure ezingama-24, kuyilo lwegraphic okanye uluhlu lwe Izinto ezingama-25 esinokuzenza ukunceda i-KDE, Kodwa iindaba ezisizisa apha kukukhutshwa okusemthethweni kwePlasma 5.23.
Iiplasma 5.23 Iimbalasane
Ukuphuculwa kweBreeze, Oko kukuthi, umxholo omtsha onamacandelo amaninzi ahlengahlengisiweyo.
Ukukhatywa kwebhola ekhatywayo kunye nophuculo olususela kubuhle ukuya kwintsebenzo.
Iwijethi yebhodi eqhotyoshwayo inokugcina ukuya kuthi ga kwizinto ezingama-20, phakathi kwezinye izinto ezintsha.
Ukuphucula ujongano ukuze uqwalasele iisetingi zenkqubo ethile.
Uphuculo oluninzi eWayland.
Uyilo lwesikrini oluhambelanayo lweeseti zokubek 'esweni phakathi kweX11 kunye neeseshoni zeWayland.
Xa utshintshela kwimowudi yethebhulethi, ii-systray icon zonyusa ubungakanani ukwenza izinto zibe lula kwiminwe yakho.
Ujongano lokubonisa izaziso ngoku luxhasa ukukopa okubhaliweyo kwibhodi eqhotyoshwayo ngeCtrl + C.
I-applet ephunyezwa kwimenyu yehlabathi ijongeka ngakumbi njengemenyu eqhelekileyo.
Isakhono sokutshintsha ngokukhawuleza phakathi kweeprofayili zamandla phakathi kokonga umbane, ukusebenza ngokulingeneyo okuphezulu, kongeziwe.
Kwinkqubo yokubeka iliso kunye neewijethi ukubonisa inqanaba leenzwa, ukuboniswa kwesalathi somthwalo ophakathi.
I-applet yokulawula ivolumu ngoku yahlula usetyenziso oludlalayo nolurekhoda isandi.
Ukongezwa komboniso weenkcukacha ezongezelelweyo malunga nenethwekhi yangoku kwi-widget yokulawula uxhumano lwenethiwekhi.
Yongeze amandla okucwangcisa ngesandla isantya sonxibelelwano lwe-Ethernet kwaye ukhubaze i-IPv6.
Inkxaso yongezwa kwiiprotocol ezongezelelweyo kunye noseto lokungqinisisa kunxibelelwano nge-OpenVPN.
Malunga nokuba iya kufumaneka nini, eyona nto iqinisekileyo yile ukwaziswa ngokusesikweni. Kananjalo ukuba inkqubo yokuqala yokufumana lonke uhlaziyo iya kuba yi-KDE neon, elandelwa ngabo balandela imodeli yophuhliso lweRolling. Ukuthathela ingqalelo ukuba kuxhomekeke kwi-Qt 5.15, njengePlasma 5.22, izakuza Kubuntu + Backports PPA kungekudala.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ubunlog » Iidesika » KDE » IPlasma 5.23, ngoku iyafumaneka kushicilelo lwesikhumbuzo sama-25 kunye nomxholo omtsha kunye nezinye izinto ezintsha
I-LibreSprite, inkqubo yasimahla ye-pixel-art okanye ukudala kunye nokuhambisa iiSprites